Weerar 6 Qof Lagu Dilay oo Xalay Ka Dhacay Magaalada Mandheera ee dalka Kenya (VIDEO) - Hablaha Media Network
Weerar 6 Qof Lagu Dilay oo Xalay Ka Dhacay Magaalada Mandheera ee dalka Kenya (VIDEO)
HMN:- Weerar xalay lagu qaaday dad Kenyan ah oo ku sugnaa magaalada Mandheera ee dalka Kenya ayaa waxaa ugu yaraan ku geeriyooday 6 Ruux, iyadoo 27 Qof oo kale laga soo badbaadiyay goobtaasi sidaasi ayaa waxaa shaaciyay Boolisk magaalada Mandheera.
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa lagu tuhmayaa inay weerareen goob laga bixiyo adeegyada Bulshada oo lagu magacaabo Bulla, waxaana halkaasi afduub ahaan loogu qabsaday dad badan oo goobtaasi ku sugnaa.
Weerarkan ayaa la sheegay inuu dhacay xalay saqdii dhexe 2:45, waxaana Guddoomiye Roobow uu sheegay inay khasaare weyn tahay in lix qof ay dhintaan inkasta oo tiro intaas ka badani la badbaadiyay.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in qarax uu dhacay markii boolisku isku dayay inay gudaha ugalaan guriga inkastoo qaraxaas aysan cidi wax ku noqonin.
Boolisku wuxuu sheegay in miinooyin lagu aasay guriga ay hakad gelisay in meydadkii laga soo saaro gudaha gurigaasi.
Guddoomiyaha Gobolka Mandheera Frederick Shisia, ayaa sheegay in ay hadda ka shaqeynayaan sidii ay u jari lahaayeen Isgaarsiinta degaanka si ay ciidanka ugu suuragasho in ay galan dhismaha uu weerarka ka dhacay halkaas oo ay rumeysan yihiin inay ku jiraan miinooyin ay shabaabka halkaasi ka tageen.